> Household wear>SLIDING DOOR CABINET-Glass Door
Full height sliding glass door cabinet with3adjustable shelves and keylock. ဘေးဆွဲမှန်တံခါးဗီရိုအမြင့်ဖြစ်သည်။ ဖြုတ်တပ်အသုံးပြုနိုင်သော စင် (၃)ချပ်ပါရှိပြီး၊ သော့ခတ်နိုင်သည်။
Size: W91.4*D45.7*H182.9 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၉၁.၄၊ အနံ ၄၅.၇၊ အမြင့် ၁၈၂.၉ စင်တီမီတာ3adjustable shelves ဖြုတ်တပ်အသုံးပြုနိုင်သော စင် (၃)ချပ်ပါရှိသည်။ Extra shelf also available for sale အချပ်ပိုစင်များအားလည်း သီးသန့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Dimensions : 914 x 457 x 1829 cm